‘Maridrefy Avy Amin’ny Helo’: Lahatsary Fanadihadiana Momba Ny Olana Amin’ny Rafi-pamonjàna Meksikana · Global Voices teny Malagasy
‘Maridrefy Avy Amin'ny Helo': Lahatsary Fanadihadiana Momba Ny Olana Amin'ny Rafi-pamonjàna Meksikana
Nandika (en) i Carolina Pina Velasco
Voadika ny 27 Febroary 2017 5:25 GMT
Vakio amin'ny teny русский, English, Français, Ελληνικά, Español
Rehefa avy nametraka ny fanontaniana Ary ny fonja ao Meksika, iza no miresaka azy? [mg] tamin'ny lahatsoratra teo aloha, toa tsara raha dinihana indray ny lohahevitra rehefa nampiseho indray ireo andiana lahatsary fanadihadiana nandeha tamin'ny fantsom-baovao vao nisokatra ao Meksika, Imagen Televisión, fa tsy dia liana, na tsy liana mihitsy amin'ny rafi-pamonjàna Meksikana ny fampahalalam-baovao.
Nanomboka nandefa fandaharana ny Imagen Televisión tamin'ny faran'ny taona 2016 izay mipetraka ho safidy hafa ankoatra ireo fahitalavitra roa manjakazaka Televisa sy TV Azteca.
Mitondra ny lohateny hoe “Graduaciones del Infierno” na “Mari-drefy avy amin'ny helo”, manondro ny fomba fahazoan'ireo gadra fiofanana marobe momba ny heloka bevava ao am-ponja ireo andiana lahatsary fanadihadiana notontosain'ilay mpanao gazety malaza Ciro Gómez Leyva. Milaza momba ireo mpiasan'ny fonja ao an-tanànan'i Mexico tafiditra amin'ny fanaovana kolikoly ihany koa izany, tahaka ny varotra na fanofana finday ho an'ny gadra, izay mampiasa ny fitaovana avy eo hakana vola isolokiana.
Ny fisolokiana amin'ny finday no iray amin'ireo heloka bevava ahazoana vola be indrindra ao Meksika, ary nohazavain'ny fanjakana tahaka izao izany:
Ny fisolokiana no heloka bevava tena manjaka, na izany antso sandoka milaza fa misy havana nisy naka an-keriny na niharan'ny fahavoazana, na hafatra milaza aminao fa nandresy tamin'ny fifaninanana ianao, na fandrahonana avy amin'ny vondrona jiolahy, na filazana fiatoana tolotra vonjimaika avy amin'ny orinasan'ny findainao noho ny olana servisy.
Nisafidy hampiasa ity fomba ity ny sasany amin'ireo andian-jiolahy mba hahazoana tombontsoa ara-bola; misafidy laharana finday an'anjony izy ireo mba hanaovana antso fisolokiana ary mahavita manara-maso ny lasibatr'izy ireo indrindra amin'ny alalan'ny herisetra ara-tsaina.
Araka ny filazan'ny gazety Excélsior (mpikambana ao amin'ny vondrona Imagen, ilay fantsona fahitalavitra ihany), fara fahakeliny, iray amin'ireo mpiasa-panjakana naseho tamiin'ny tatitra no voasambotra sy notoriana.
Na inona na inona antony, tsy mba mamerina ny tatitra nataon'ny Fahitalavitra Imagen ireo haino aman-jery nentim-paharazana hafa, anisan'izany ny fantsona fahitalavitra lehibe ao amin'ny firenena. Na izany aza, nanjary nanamafy ny zava-misy sy niresaka momba izany tamin'ny alalan'ny tenirohy #GraduacionesDelInfierno ny Meksikana ao amin'ny media sosialy tahaka ny Twitter:
#GraduacionesDelinfierno (Mari-drefy avy amin'ny Helo) notontosain'ny @ImagenTVMex, tatitra mahatalanjona. Fanadihadiana mahafinaritra momba ny kolikoly any am-ponja.
#GraduacionesDelinfierno (Mari-drefy avy amin'ny Helo) ampahany kely momba ny kolikoly rehetra misy ao amin'ny rafi-pamonjàna maloto. #YLoQueFalta (Ary inona ihany koa no mbola ho avy)
Mpisera Madame Déficit nangataka tamin'ny lehiben'ny governemanta ao andrenivohitra, Miguel Ángel Mancera, mba hanazava ny antony mahatonga ny fitantanany tsy hiraika amin’ ity lohahevitra ity:
Lesona avy amin'ny lahatsary fanadihadiana #GraduacionesDelinfierno (Mari-drefin'ny Helo) Raha tsy mijery izany ao amin'ny fahitalavitra ireo mpanao politika Meksikana, dia tsy hanomboka hiasa izy ireo, sa tsy izany @ManceraMiguelMX?
Noho ity fikarohana notarihan'ny Imagen Televisión ity, hitam-bahoaka ny fahasimban'ny rafi-pamonjàna Meksikana. Ny fanontaniana mipetraka ankehitriny dia mandra-pahoviana, ary ahoana no hanasaziana ireo jiolahy ireo raha efa any am-ponja ny maro amin'izy ireo.